အီးမေးလ်များမှဖြတ်သန်း။ မရပါလား SPF မှတ်တမ်းတစ်ခုထည့်ပါ။ | Martech Zone
အီးမေးလ်များမှဖြတ်သန်း။ မရပါလား SPF မှတ်တမ်းတစ်ခုထည့်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 30, 2008 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 19, 2015 Douglas Karr
ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့အီးမေးလ်ကိုကူးပြောင်းလိုက်ရုံပဲ ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းများ။ အခုထိငါတို့ပေးတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုတကယ်ပဲချစ်တယ်။ ဂူဂဲလ်သို့မရောက်မီကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုများ၊ စာရင်းဖြည့်စွက်မှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ယခု၎င်းအရာအားလုံးကို Google ၏ရိုးရှင်းသော interface ဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်သတိထားမိသည့်အမှားတစ်ခုမှာအီးမေးလ်အချို့ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့၏ စနစ်ကတကယ်တော့အဲဒါကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး us။ ငါဂူးဂဲလ်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုဖတ်ပြီးတချို့လုပ်ခဲ့တယ် bulk Email ပေးပို့သူ နှင့်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည့် application ၂ ခုထဲမှအီးမေးလ်တစ်ခုရှိသေးသည်။ ၎င်းမှာအခြားသူတစ် ဦး ဦး ကအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအပြင်အခြားအိမ်ရှင်လည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်မှာဂူးဂဲလ်သည်အီးမေးလ်အချို့ကိုကျပန်းပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ပေးပို့သူမှတစ်ဆင့်အတည်ပြုခြင်းမပြုနိုင်ပါ SPF မှတ်တမ်း။ အတိုချုပ်ပြောရရင် SPF ဆိုတာဒိုမိန်းစံချိန်အတွင်းကနေအီးမေးလ်ပို့တာကိုသင် domain တွေ၊ IP address တွေစသဖြင့်မှတ်ပုံတင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်မည်သည့် ISP ကိုမဆိုခွင့်ပြုသည် သင်၏မှတ်တမ်းကိုရှာဖွေ။ အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုပါ သင့်လျော်သောအရင်းအမြစ်မှလာသည်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်၎င်းသည်အီးမေးလ်အမြောက်အမြားနှင့် spam blocking စနစ်၏အဓိကနည်းလမ်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူတိုင်းသည်မည်သူမဆိုသူတို့ပေးပို့သောအီးမေးလ်ရင်းမြစ်များကိုစာရင်းပြုစုရန်အတွက်၎င်းကိုအတွင်းသို့ wizard တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အချက်တစ်ခုလုပ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ လူတိုင်း SPF နှင့်အတူသုံးပြီးအတည်ပြုသင့်သည်! ဒီမှာ SPF အကြောင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ဒိုမိန်းကိုစပမ်များကနာမည်ပျက်စာရင်းမှမကာကွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် ဟန်ဆောင် မင်းဖြစ်ဖို့
သိကောင်းစရာ - သင်လုပ်နိုင်တယ် သင်၏ SPF မှတ်တမ်းကိုအတည်ပြုပါ 250ok မှာ။
သင်၏ SPF မှတ်တမ်းကိုရေးရန်၊ SPF Wizard ကိုသင့်အတွက်စံချိန်တင်ရေးသားရန်သင့်အားကူညီမည့်အွန်လိုင်းကိရိယာတစ်ခု။ ထို့နောက်သင်က၎င်းကိုသင်၏ Domain မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့ကူးယူကူးယူရုံသာဖြစ်သည်။ ငါဒီ post ကိုရေးနေတုန်းငါတို့မှတ်တမ်းတွေကို update လုပ်နေတယ်။
ငါ၏အစာရင်းတွင်လာမည့်သုတေသနဖြစ်ပါတယ် ဒိုမိန်းသော့ချက်များ။ ငါတို့ရှိတုန်းကငါတို့ရှေ့ကိုကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းခဲ့တယ် AOL နှင့်အတူ whitelisted မနှစ်က။ ငါစစ်ပွဲဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ခံစားရတယ်! အရမ်းဆိုးတာပဲ SPAM ကွင်းဆက်များကိုဖြတ်ပြီးကျော်ဖြတ်ရသောဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ နေဆဲ!
Tags: 250okပို့ဆောင်ရေးစာပုံးjunkပေးပို့သူမူဝါဒမူဘောင်စပမ်းspam filter ကိုspfspf မှတ်တမ်း
ဧပြီ 30, 2008 မှာ 10: 03 pm တွင်
SPF နှင့် Sender ID တို့၏ပြessentiallyနာမှာ၎င်းသည်အီးမေးလ်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ DomainKeys (နှင့်ယခု DKIM ဟုခေါ်သောစံ) သည်လူအများစုအတွက်အနာဂတ်၏လှိုင်းများ၊ သို့သော်၎င်းအားဖြန့်ဝေရန်နှင့်အတည်ပြုရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။